Amakhosi ashayela phansi | Scrolla Izindaba
Amakhosi ashayela phansi
I-Kaizer Chiefs ibuyele ekhaya ngemuva kokunqoba okubalulekile e-Cameroon kwi-CAF Champions League – kodwa uhambo olude lungase luthwale kanzima.
Ukufika kwawo sekwedlule isikhathi kusho ukuthi Amakhosi ngeke abe nesikhathi esanele sokuzilungiselela ngaphambi kokubhekana ne-PWD Bamenda emlenzeni wesibili ngoLwesihlanu enkundleni yezemidlalo i-FNB eGoli.
Umqeqeshi uGavin Hunt ukuqinisekisile ukuthi abadlali bakhe kuzofanele bathathe lula kuleli sonto.
“Ukuhamba kuhlale kukhathaza. Ngakho-ke kuleli sonto ngeke senze uqeqesho olunzulu. Konke kumayelana nokululama nokunakekela ukulimala okungatheni. Futhi, kuzofanele sibheke ukuthi ngubani ongenayo nokuthi ngubani ophumayo. E-Cameroon umdlali oyedwa noma ababili balimele,” kusho uHunt.
Ukudlala ngokulingana kulo mdlalo kuzokwanela ukubona Amakhosi edlulela emzuliswaneni wesibili lapho ezobhekana khona nompetha base-Angola i-Primeiro Agosto. Umthetho wamagoli asekuhambeni uzosebenza uma i-Chiefs idlala ngokulingana ngoLwesihlanu.
UHunt, nokho, akafuni enye into ngaphandle kokuwina ekhaya.
“Kumele sithuthuke ngokhukhahlela kweethu kokugcina. Lokho kuzosinikeza amathuba amahle okushaya amanye amagoli,” kusho lo mqeqeshi owake waqeqesha i-Bidvest Wits.
“NgoLwesihlanu ngifuna amagoli amaningi ngobuningi bawo. Besikuswele lokho emdlalweni wokuqala.”
I-Chiefs ilahlekelwe umgadli ovelele uSamir Nurkovic ngaphambili. Okwamanje ulimele futhi ukungabikho kwakhe kuyakhombisa. I-Chiefs ibingasebenzi kahle phambi kwamagoli amaqembu aphikisayo kanti u-Serbia obiyimbangi kaNaturena ngesizini edlule.
Ushaye amagoli ayi-14 emidlalweni engama-24 kwisizini yakhe yokuqala.
ULeornado Castro, uzakwabo ngokuhlasela, udonsa kanzima engekho lo uSerbia. Amagoli akhe amabili bebhekene ne-Golden Arrows emdlalweni we-DStv Premiership emasontweni amabili edlule yiwona kuphela akwazi ukuwashayela i-Chiefs kuze kube manje.
Eminye imithombo yamagoli iqhamuke kubadlali basemuva uEric Mathoho noYagan Sasman abashaye igoli bebhekene ne-Bamenda ne-MTN ngokulandelana.
Amakhosi awakaze adlulele emiqhudelwaneni yokuqala yase-Champions League kuyo yonke imiqhudelwano yezwekazi. Okwamanje kusazobhekwa ukuthi bazoyiphula yini le nkololoze ebasokolise iminyaka.